हजारौ नेपाली भएको ठाउँ जापानमा शक्तिशाली भूकम्प र आँधी आयो, झन्डै ५१ लाख मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो ! – Life Nepali
हजारौ नेपाली भएको ठाउँ जापानमा शक्तिशाली भूकम्प र आँधी आयो, झन्डै ५१ लाख मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो !
जापान अहिले शक्तिशाली आधीको चपेटामा छ । सन् १९५८ यताकै सबै भन्दा ठुलो भनिएको आँधीबाट जापानमा बसोबास गर्नेहरु प्रभावित भएका छन् । हगिबीस नाम दिएको सो आँधीबाट राजधानी टोकियोसहित नागान्यो, एमानासी, गुन्मा, सिजोओका, साइपामा, सानागावालगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । अधिकांश स्थानहरु पानीले भरिएका छन् । यो आँधी २१६ किलोमिटर प्रतिघन्टाको दरमा अगाडी बढिरहेको छ । यसको प्रभावले आँधी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ भने कतिपय ठाउँमा खानेपानीको पनि अभाव हुन थालेको खबरहरु आउँन थालेका छन् ।
त्यस्तै धेरै ठाउँमा कलकारखाना तथा पसलहरु पनि बन्द छन् । आँधीका कारण टोकियो शहरसहितका अधिकांश क्षेत्रमा डुवान छ भने विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । उद्योग, कलकारखाना र पसलहरू पनि बन्द छन् । भुकम्पको प्रकोपसँग जुध्न बनाइएका संरचनाहरु पुर्णत सक्रिय बनाइएका छन् भने झन्डै ५१ लाख मानिसहरुलाई आधी प्रभावित क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । अहिलेसम्म ठुलो हताहतीको खबर बाहिर आएको छैन तर आँधीकै कारण टोकियोको नजिकको स्थानमा एउटा मिनिट्रक दुर्घटनामा परेर एकजना मानिसको ज्या न गएको छ ।
नेपालीहरुको स्थिती के छ ?
नेपाली दुतावासको तथ्यांक अनुसार जापानमा करिब ९० हजार नेपालीहरु बसोबास गर्छन् । यो संख्या जापानभर बसोबास गर्ने नेपालीहरुको हो । टोकियो लगायत नेपाली बसोबास रहेको स्थान आँधीको प्रभावमा रहेको कारण नेपालीहरु पनि प्रभावित भएका छन् । तर अहिले सम्म कोही पनि नेपालीहरु हताहत भएको खबर दुतावासमा नआएको दुतावासका प्रतिनिधीहरुले बताएका छन् ।
जापानमा रहेको नेपाली दुतावासले सकेसम्म धेरै नेपालीहरुको सम्पर्कमा रहेको र आवश्यकता अनुसार आफ्नो उपस्थिती जनाउँन प्रयासरत रहेको जनाएको छ । त्यस्तै शनिबार चिवालाई केन्द्रविन्दु बनाइ ५.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। स्थानीय समयअनुसार ६ बजेर २२ मिनेटमा गएको जापान टाइम्सले जनाएको छ। त्यस भूकम्पबाट भने सुनामीको कुनै खतरा छैन।
Previous १७ दिन अगाडी मात्रै कोरिया आएका एक नेपालीको दु’र्घटनामा परि मृ’त्यु !
Next कसैले नसोचेको चिनियाँ मिडियामा यस्तो आयो काठमाडौंको फोटोफिचर हेर्नुहोस !
सु,पा,दे,उ,राली मन्दिरको दर्शन गरि माघ १३गतेको राशिफल हेर्नुस् ।
श्रीमती ल्याउन ससुराली गएका बझाङका युवक बे,प,त्ता
सात दिनदेखि धनगढीमा अध्ययनरत अछाम मंगलसेनका विद्यार्थी वे,पता